avylavitra · Febroary 2010 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Febroary, 2010
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Febroary, 2010
Rosia 27 Febroary 2010
Tantara iray vao haingana mikasika lozam-pifamoivoizana no isan'ny iray amin'ireo fanehoan-kevitra anaty aterineto sy manerana ireo tanàna Siberiana mba ho fanehoana hoe manao ahoana ny ezaka raisin'izany fanentanana tsy nomanina izany hiantraika amin'ny tena zava-misy.
Malezia: Sarotra fafàna ny fanalàna baraka ny fiandriànana
Malezia 16 Febroary 2010
Ilay Maleziana mpitoraka blaogy, Khairul Nizam Abd Ghani, na “Aduka Taruna”, dia nosamborina tsy ela akory izao noho izy notondroina ho nanala baraka an'i Sultan Iskandar ibni Almarhum Sultan Ismail, Sultan ao Johor. Araka ireo tati-baovao, ny Minisitry ny Atitany, Hishammuddin Tun Hussein, dia nilaza fa tsy ho afa-maina fotsiny...
Tonizia: Sivana lava izao!
Tonizia 09 Febroary 2010
Mafy lavitra noho ny tany aloha, toa lasa fitsipi-dalao mihitsy ao Tonizia ny sivana. Vavolombelon'ny ady napoakan'i Ammar (solonanarana nomena ny sivana Toniziana), izay nanivanivam-poana blaogy maro tapa-bolana lasa izao ny tontolon'ny fitorahana bolongana Toniziana. Miray feo manohana ireo namany 'voasivana' ny mpitoraka blaogy maro.